पत्रकारको सुरक्षाको लागि राज्य स्तरबाटै केही व्यवस्था भए राम्रो – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १७:२८ June 10, 2020
उर्मिला भट्टराई / दिपिन ढुङ्गाना
जब कोरोना भाइरस चिनको वुहान प्रान्तमा देखियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुबाट समाचार आयो, त्यति बेला मेरो मनमा अलिकति पनि डर, त्रास थिएन । कोरोना भाइरस जब चिनको वुहान बाट बिस्तारै अन्य प्रान्तमा र अन्य देशमा पनि फैलिन थाल्यो तब बिस्तारै मनमा के होला यो रोग भन्ने लाग्न थाल्थो । नेपालमा आइ हाल्यो भने के गर्ने ? कस्ता ब्यक्तिलाइ छिटो सक्रमण हुने हो ? कतै आफैमा यो रोगको सक्रमण हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो । यद्यपि कोरोनाको कारण आफ्नो व्यवहारमा खासै परिबर्तन गरिएन । कोरोना कै बिषयमा विश्वको कुरा गर्न रुचाइन । विश्वभरि महामारिको रुपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ का बारेमा अब त तपाइले पनि धरै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो । सर्तकता पनि अपनाउनु भएको होला भन्ने आशा र विश्वास छ ।
फिल्डमा जानै पर्ने बाध्यता भएका घरका सदस्यको चिन्तामा धेरैका परिवारका सदस्यहरु छन् । जति हाम्रो चिन्ता हामो घरपरिवार अनि आफन्तमा छ । राज्यको सुरक्षा अंगसँगै राज्यले नै मानेको चौथो अंग भएर काम गरिरहेका पत्रकार र तीनका परिवारमा परेको असर भोगेकाहरुलाई बाहेक कमैलाई मात्र अनुभव होला यो विषयमा । हरेक दिन घरबाट फिल्डमा निस्कनुपर्छ । बिहान रेडियो स्टेसनका लागि निस्कनु अघि आमा सधैं चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । आमा मात्रै होइन परिवारका सबै सदस्यको चिन्ता हुन्छ नै । आमाले प्रत्येक दिन भन्नुहुन्छ, ‘सुरक्षित भएर हिड है नजाओ भन्दा मान्दैनौ ।’
बेलुका घरमा बसेर आफैले पढेको कोेरोनाका सङ्क्रमित बढेको समाचार सुनेपछि परिवारका सदस्यको प्रतिक्रिया हुन्छ, अब कुन दिन आफैलाइ कोरोना लाग्ने हो । काम सकेर घर पुग्दा पनि आमा सहित परिवारका सदस्यको चिन्ता एउटै हुन्छ । यी सबै कुरा साँझ घरमा गर्दा आफ्नो पनि फेरी एक पटक मन झस्किन्छ । र फेरि मन बुझाउनु त छदैछ । हामी भन्दा पनि बढी जोखिम मोलेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटेका छन् । हामी सबै उस्तै त हो नि ।
दिनभरको रिपोर्टिङपछि घर फर्किदा बाटोमा भेटिएकाहरु भन्छन् – “उ पत्रकार जी आउनुभयो, दिनभरि डुलेर हिड्नुहुन्छ कोरोना सारेर पो ल्याउनुभयो कि” हामीलाइ पनि मन हुन्छ र ? कोरोना सार्नलाइ ? मानिसहरु बुझ्दैनन् । नबुझेको देखेर नरमाइलो लाग्छ । आखिर हामीहरु समुदायलाइ नै जानकारी र सूचना दिनलाइ नै खटिका हौ । पत्रकारिता पेशा यस्तो रहेछ, जस्तो सुकै समस्या र असजिलो समयमा पनि रिपोर्टिङ गर्न र काम गर्न छोड्न नमिल्ने ।
पत्रकार भन्दा जोखिमका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका परिवारमा हामि पत्रकारका घरमा भन्दा बढी छटपटी होला । यो जटिल परिस्थितिमा घरमा सूसुचित हुन पाउने जनताको अधिकारलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिने पत्रकारको र उसको परिवारको चिन्ता कसले लिने ?
(लेखक उर्मिला भट्टराई रेडियो सिन्धुलिगढी, सिन्धुली र दिपिन ढुङ्गाना रेडियो मेलम्चि, सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत पत्रकार हुन् )